म्यान्मारमा इन्टरनेट बन्द हुदा अफलाइन एप ब्रिजफाईको सहारा – News Np Online
अपह`रणमा परेकी गुल्मीकी २१ वर्षीय सम्झनाको श`व घर नजिकै बारीको कुनामा फेला !
दाङ फेरी के भयो यस्तो, शिक्षकलाइ कसले गर्यो यस्तो, ( पुरा भिडियो सहित )
महानायक राजेश हमालले भुईँमा बसेर लिए कृष्णप्रसाद, भाइरल बन्यो तस्बिर
फेरि घ’ट्यो अर्को ड रलाग्दो घ’टना, ९ बजेसम्म पढेर बसेकी १७ बर्षिया कबिताको मध्यरातमा भयाे सोच्नै नसकिने तरिकाले, मृ`त्यु…
Omg भर्खरै ओलिले सबै नेपाली लाई खुसीयाली दिय सबै चोर नेता हरुको भागाभाग7हजार लाइ जेल लगियो जय ओलि ओलि सरकार
पुजाले पहिलो चोटी मुख खोलिन मोबाईलमा मैले पनि यस्तोसम्म देखेको थिए सपनालाई स्यालुट छ
चार युवतीले रुँदै भने- साहुले लुगा फेरेको बेलाको भिडियो खिच्यो र हामीलाई धम्यायो, हामी बन्दी छौं
मुख्य पृष्ठ /International/म्यान्मारमा इन्टरनेट बन्द हुदा अफलाइन एप ब्रिजफाईको सहारा
म्यान्मारमा इन्टरनेट बन्द हुदा अफलाइन एप ब्रिजफाईको सहारा
काठमाडौँ । म्यानमारमा सैनिक शासन फर्किएपछि त्यहाँको सिभिल सोसाइटीको संगठन लोकतन्त्र बहालीको लागि प्रयास गर्ने तयारीमा जुटेको छ । आइतबार राति भएको सैनिक कू पछि देशमा कुनै ठुलो विरोध प्रदर्शनको खबर बाहिर आएको छैन तर नागरिक समाजमा रहेको तनावको चर्चा चलिरहेको छ ।
म्यानमारका युवाहरु अहिले अफलाइन मेसेजिंग एप ब्रिजफाईको माध्यमबाट अभियान चलाउने तयारी गरिरहेका छन् । हङकङको पत्रिका साउथ चाइना मर्निंग पोस्टको अनुसार, दुई दिनमा छ लाख भन्दा धेरै यस एपलाई डाउनलोड गरिएको छ ।
हङकङको चीन विरोधी समूहले आफ्नो आन्दोलनको क्रममा यस एपको प्रयोग गरेको थियो । सोमबार म्यानमारको सैनिक शासकले पुरै देशमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । पछि इन्टरनेट पुन सुचारु गरिएको थियो तर यसै बीच ठुलो संख्यामा ब्रिजफाई एप डाउनलोड गरिएको हो ।
यस एपलाई मेक्सिकोस्थित एक कम्पनीले तयार गरेको हो । उक्त कम्पनीले मंगलबार ट्वीटमा लेखेको छ, “हामीलाई आशा छकी यस कठिन समयमा यो एप म्यानमारको मानिसको काम आउनेछ ।” सैनिक कू पछि यङ्गून र राजधानी नेयपीडो वरपरको क्षेत्रमा इन्टरनेटको सबै सेवा तथा फोन सेवा केहि समयको लागि बन्द गरिएको थियो ।
त्यसपछि सामाजिक कार्यकर्ताले मानिसहरुलाई ब्रिजफाई एप डाउनलोड गर्न भनेका थिए ।
कार्यकर्ताहरुको अनुसार, भविष्यमा सैनिक शासकहरुले इन्टरनेट बन्द गर्ने पहल लगातार उठाउन सक्छन् र त्यसैले आपसमा संवाद कायम राख्नको लागि पहिला देखि नै तयारी गर्नुपर्दछ ।
ब्रिजफाई एप बनाउने कम्पनीको सहयोगीमा बिज स्टोन पनि हुन् । स्टोन ट्वीटरका सह-संस्थापक थिए । इस एपको प्रयोग थाइल्याण्डमा राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शनकारीले पनि गरिरहेका छन् ।
यो एप ब्लुटुथको माध्यमबाट काम गर्दछ । यसले सन्देश आदान-प्रदानको लागि मेश नेटवर्क्सको प्रयोग गर्द्छ । यस एप सबै भन्दा धेरै ती देशहरुमा लोकप्रिय भएको छ जहाँ शासकले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
विशेषज्ञहरुको अनुसार, सुरक्षा एजेन्सीहरु यस एपको माध्यमबाट हुने संदेशको आदान-प्रदानमा निरीक्षण पनि गर्न सक्छन् । ब्रिजफाई जस्तै अर्को एप हो, फायरच्याट, जसलाई ईरान र इराकमा सत्ता विरोधी संगठनहरुले व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
बेलायती पत्रिका “द गार्जियन” को अनुसार, मंगलबार, म्यानमारमा धेरै मानिसले सामाजिक संजालमा आङ सान सूकीको लागि समर्थन गरेका छन् । केहि मानिसले सामाजिक संजाल माध्यममा ब्यारीयार तोड्ने प्रयास गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।
म्यानमारमा यसलाई सैनिक शासनको विरोधको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । एक दशक पहिला सैनिक शासनको क्रममा यस्तै तस्वीरको माध्यमबाट विरोध जनाएका थिए ।
द गार्जियनको एक रिपोर्टको अनुसार, म्यानमारको दर्जनौं अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सहरुले तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले सैनिक शासनमा काम नगर्ने बताएका छन् ।
संसदको लागि निर्वाचित करिब चार सय सदस्यहरुलाई आफ्नो सरकारी आवासमा रहन निर्देशन दिइएको छ । सांसदहरुलाई एक अर्कासंग कुराकानी गर्न र फोनमा देशको अन्य क्षेत्रमा रहेका मानिससंग सम्पर्क गर्न अनुमति दिइएको छ तर उनीहरुलाई परिसर भन्दा बाहिर निस्किन दिइएको छैन ।
काठमाडौँ । म्यानमारमा सैनिक शासन फर्किएपछि त्यहाँको सिभिल सोसाइटीको संगठन लोकतन्त्र बहालीको लागि प्रयास गर्ने तयारीमा जुटेको छ । आइतबार राति भएको सैनिक कू पछि देशमा कुनै ठुलो विरोध प्रदर्शनको
म्यान्मारको सैनिक ‘कू’ विगत र भविष्य
काठमाडौं । म्यान्मारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । यहाँका निर्वाचित नेताहरू आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा
म्यान्मारमा यसपटक लोकतन्त्रको पुनर्बहाली किन कठिन छ ?
काठमाडौँ । म्यान्मारमा भएको सैनिक कू ले सत्ता परिवर्तन भएपछि यस पटक लोकतन्त्रको पुनर्बहाली कठिन हुने र लोकतन्त्रको लडाई सजिलो नहुने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण अन्तराष्ट्रिय स्थिति हो र म्यान्मारको
सुकीसहितका नेताहरुलाई रिहा गर्न एनएलडीको आग्रह
याङ्गुन । म्यान्मारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । एनएलडीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेतृ आङ्साङ्
भा’रतलाई ठु’लो झ’ड्का ! सि’मामा थाहै नपाइ चिनले यसरी गाउँ नै बना’इदियो ।
BREAKING::कोरोना भाइरसले नयाँ रूप लियो, खोपले पनि काम नगर्ने आशंका
भिटामिन ‘डी’को कमी भएमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको खतरा बढी हुने : अध्ययन
अमेरिकासँग चीनको बदला: छेन्दुको महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्नू
सलह पोलेर बिक्री गरिन्थ्यो : सत्यमोहन जोशी